भारतबाट फर्किएका ४३ जनामा देखियो कोरोना, एकजनाको मृत्यु : RajdhaniDaily.com -
Home प्रमुख भारतबाट फर्किएका ४३ जनामा देखियो कोरोना, एकजनाको मृत्यु
धनगढी । कैलालीमा ५० बर्षीय कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित विरामीको मृत्यु भएको हो ।
अस्पतालको कोभिड अस्थायी अस्तालको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचाररत पुरुषको सोमबार विहान मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलिप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–३ का ५० वर्षीय पुरुष हुन् ।
उनीमा आइतबार कोरोना पुस्टी भएको थियो । जटिल प्रकृतिको स्वासप्रस्वासको समस्या देखिएको उनलाई आइतबार नै अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको शवको व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गरेको छ ।
भारतबाट आएकाको परीक्षण गर्दा एकै दिन ४३ जनामा कोरोना संक्रमण
सोमबार भारतको गौरीफन्टा नाकाबाट नेपाल आएकाहरुको परीक्षण गर्दा ४३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । सोमबार साँझसम्म ६ सय ६ जनामा गरिएको परीक्षणमा ४३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
गौरीफण्टा नाकामा राखिएको हेल्थडेस्कका इञ्चार्ज दिनेश ठकुल्लाका अनुसार सोमबार साँझ सम्म ६ सय ६ जना नेपाली स्वेदश फर्किएका छन् । ‘सीमानाकामा ६ सय ६ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ४३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो,’ ठकुल्लाले भने, ‘दैनिक एक हजार नेपाली अहिले गौरीफन्टा नाका भएर स्वदेश फर्किरहेका छन् । आइतबार मात्रै ५४ जनामा एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना देखिएको थियो ।’
एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा पोजेटिभ देखिएकाहरूलाई धनगढी उप–महानगरपालिकाले वडा नम्वर १५ को कनरीमा बनाएको आइसोलेसनमा राख्दै आएको ठकुल्लाले जानकारी दिए । उक्त आइसोलेसन भरीभराउ भएपछि धनगढीको कवर्डहलमा राख्ने तयारी भएको उप–महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तिव्र फैलिएपछि अहिले सीमानाकामा स्वदेश फर्किनेको लर्को छ । पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकी र गौरीफन्टा स्वदेश फर्किनेको भीड बढेको हो । अहिलेसम्म भारतबाट फर्किरहेकाहरुमा कोरोना परीक्षण गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । दुवै नाकामा सोमबारसम्म १० हजार जनाको परीक्षण गरिएकोमा चार सय ५० जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
काठमाडौं । निवर्तमान प्रदेश सांसद कुन्दन कुशवाहाले आफू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) नभएको बताएका छन् । आज संचारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै निवर्तमान प्रदेससभा सदस्य कुशवाहाले पार्टी...
लन्डन । इङ्लिस प्रिमियर लिगको म्यानचेष्टर युनाइटेडका समर्थकहरुले गएराती लिभरपुल विरुद्ध खेल सुरु हुनु अगावै मैदानभित्र पसेर आफ्नो क्लबका मालिक ग्लेजर परिवारविरुद्ध नाराबाजी गरेका...
एसिड किन्न गृहमन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने
काठमाडौं । एसिड आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि सरकारले एसिडको खरिदबिक्रीमा कडाइ गरेको छ । जसअनुसार अब कुनै पनि उद्योग व्यवसायीले गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर...
डीआरको छक्कै परेंमा सरोज र आश्मा
काठमाडौं । लकडाउन खुकुलो भएपछि सक्रिय भएको कार्टुन क्रु समूहको एकपछि अर्को म्युजिक भिडियो आइरहेको छ । यसैक्रममा कार्टुन क्रुका जोडी सरोज अधिकारी र...
विदेश दीपक ओली - March 4, 2021 0
बिचार दीपक ओली - March 5, 2021 0
प्रतितोला ३०० ले बढ्यो सुनको मूल्य
अर्थ दीपक ओली - January 6, 2021 0
काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु ३०० ले उकालो लागेको छ । पछिल्ला दिनमा लगातार उकालो लागेको पहेंलो धातुको मूल्यमा आजको...
Breaking News दीपक ओली - August 30, 2020 0
अब सक्रिय राजनीति गर्छु : खरेल
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएका अग्नि खरेलले राजनीतिमा फर्किने बताएका छन् । आफ्नै कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले राजीनामा दिएको जानकारी दिए ।...
Breaking News दीपक ओली - June 1, 2020 0
काठमाडौं । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ ठुरिया जंगलमा गएराति भएको गाडी दुर्घटनामा घाइते भएका २१ जनाको नामावली सार्वजनिक भएको छ । घाइते भएकाहरु दाङ,...
खेल दीपक ओली - December 8, 2020 0
सिड्नी । सिरिज गुमाइसकेको घरेलु टोली अस्ट्रेलिया भारतविरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम टी–२० मा विजयी भएको छ । अस्ट्रेलियाले भारतलाई १२ रनले पराजित गरेको हो...
धनुषा जिल्लामा फेरी एकसाता लकडाउन
प्रमुख दीपक ओली - August 16, 2020 0
जनकपुरधाम । कोरोना जेखिमलाई मध्यनजर गर्दै धनुषा जिल्ला भरि फेरी एकसाता लकडाउन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले आइतबार राति १२ बजेदेखि साउन...
पोखराबाटै नमूना परीक्षण, पहिलो नतिजामा ३ जनाकै नेगेटिभ
प्रमुख दीपक ओली - April 1, 2020 0
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षणको रिपोर्ट आएको छ । आइसोलेसनमा रहेकामध्ये ३ बिरामीको स्वाव परीक्षण गरिएकोमा सबैको...
प्रधानमन्त्री आज डिस्चार्ज हुने
Breaking News दीपक ओली - March 13, 2020 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुँदै गएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा अपेक्षित...
टेनिस रोका - May 8, 2021
दीपक ओली - December 19, 2019
दीपक ओली - December 18, 2019